Sidee View Lugood ee kaabta faylasha loogu talagalay iPhone in Raadi iyo 5 / 4s / 4 / 3GS
Meeh gurmad Lugood ee file on your computer?
Lugood carar on your computer ayaa laga yaabaa in shaqo maalinle ah oo aad u, oo idinkuna waxaad ogaan in Lugood si toos ah ay abuuri karaan gurmad ah u qalab aad. Waxaad soo celin kartaa iPhone kaga imaanayo hore wakhti kasta oo aad rabto. Si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala badan ma ogid meeshay ka gurmad Lugood faylka waxa uu ku yaalaa ay computer. Haddii aad mid ka mid ah tahay, ha ka welwelin, halkan waa meesha uu Lugood gurmad files on your computer:
Lugood gurmad on Mac goobta: ~ / Library / Codsiga Support / MobileSync / kaabta / Lugood gurmad goobta on Windows XP, Documents \_ iyo Settings \_ (username) \_ Codsiga Data \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ kaabta \_ Lugood gurmad on Windows Vista goobta, Windows 7, iyo Windows 8: \_ Users \_ (username) \_ AppData \_ barqiyey \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ \_ kaabta Si dhaqso ah u helaan folder AppData ah, riix Start. In bar raadinta, nooca% appdata% iyo saxaafadda noqo.
Sidee baan ku arki kartaa Lugood gurmad file on PC ama Mac
Helitaanka faylka gurmad macnaheedu ma aha run ahaantii aad u helay. Si loo ilaaliyo asturnaanta shaqsi ah, gurmad Lugood waa nooc ka mid ah SQLITEDB file, kaasoo aan u oggolaanayn qof si ay u helaan ama Falanqeynta. Waxa kaliya ee aad soo celin kara waxa ku qoran oo dhan si ay u qalab aad, SMS hal ama xiriir lama oggola. Haddii aad rabto in aad u helaan, waxaad u baahan tahay qalab sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) . Waxa aad ku xoojiya sidii ay u aragto oo dhan faahfaahinta Lugood gurmad content in 2 tallaabooyinka.
Lugood ee kaabta siladda
Kaliya 2 talaabooyinka, waxa aad heli kartaa Lugood gurmad content si faahfaahsan!
Waraaqda oo dhan Lugood files gurmad u iPhone, iPad iyo iPod taabto.
Illaa iyo 17 nooc oo file waxaa laga daawan karaa oo ka soo kabsaday gurmad Lugood.
Falanqeynta Doorashada iyo dib u soo kabashada waa la heli karaa wakhti kasta.
Sidoo kale diyaar u ah gurmad iCloud.
No khasaaro xogta iyo khatar la'aan.
View kaabta Lugood on Windows
View Lugood ee kaabta on Mac
Tilmaan tallaabo-tallaabo ku salaysan yahay nidaamka qalliinka Windows. Haddii aad tahay qof user Mac ah, tallaabooyin dhab ahaan waa isku mid, laakiin waxaad weli u bedelan kartaa in tutorial ah Mac-ku-saleysan dhex button ee kor ku xusan.
Tallaabada 1. Dooro gurmad Lugood ah oo Macdan
Dr.Fone Ee macruufka ku siinayaa saddex siyaabood soo kabashada xogta. Si aad u hesho oo aad u aragto Lugood gurmad files, waxaad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah "kabsado Lugood ee kaabta faylasha". Markaas waxaad ka arki kartaa oo dhan Lugood aad files gurmad jira kombiyuutarka. Dooro mid aad rabto si ay u helaan oo guji "Start Scan" button in la sii wado.
Tallaabada 2. xogta Kulanka Xiisaha Leh oo ka soo kabsado gurmad Lugood
Marka scan la dhammeeyo, waxaad ka arki kartaa in badan oo ku jira in faylka gurmad, sida xiriirada, fariimaha, sawiro, qoraalo, wac gasho, jadwalka iyo wixii la soo. Intii lagu guda jiray kulanka xiisaha leh ee, aad sax karo wax kasta oo aad rabto oo u badbaadin on your computer ay si fudud u riixaya badhanka "Ladnaansho".
Tilmaan-bixiyahan waxa si gaar ah loo qoray in dadka isticmaala Mac. Fadlan soo baxdo iyo rakibi gurmad Lugood ee siladda aad Mac. Markaas raac tallaabooyinka hoose si ay u helaan gurmad Lugood iyo kabsado shayga aad rabto.
Ka dib markii barnaamij ku saabsan Mac, u tag hab ah "ka Lugood ee kaabta faylasha Ladnaansho Data". Markaas barnaamijka ogaadaa doonaa oo dhan Lugood files gurmad aad Mac. Dooro mid ka mid ah in aad ku socoto si ay u helaan iyo aragtida. Riix "Start Scan" button in exrtact waxyaabaha ka gurmad ah.
Tallaabada 2. View gurmad Lugood iyo kabsado xogta si aad Mac
Soo saarida ayey kuu kaliya dhowr ilbiriqsi. Marka uu sameeyo, waxaad ka arki kartaa dhammaan xogta laga soo gurmad Lugood ee file mid mid. Waxaad calaameysaa xog kasta oo aad rabto in aad badbaadin on your Mac oo guji "Ladnaansho" button loo sameeyo.
Maxaa sax ah waxaad ka arki kartaa oo ka soo kabsado gurmad Lugood leh Dr.Fone ee macruufka
Text Contents Media Contents
Messages (iMessage iyo side SMS ama MMS)
Documents app 3aad-xisbiga
Roll Camera (photos, Screenshot, sawirada badbaadiyey, iyo videos qaaday)
Xirnaantooda Message (iMessage, MMS, WhatsApp)
3-xisbi app video / sawir / audio
> Resource > Lugood > Sidee View in Raadi iyo Lugood ee kaabta faylasha